Mefi-Boschets ၏သမိုင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-01 > Mefi-Boschets ၏သမိုင်း
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှပုံပြင်တစ်ပုဒ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအထူးစွဲမှတ်စေသည်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်ကို Mefi-Boscheth လို့ခေါ်တယ်။ .သရေလအမျိုးသားတို့သည်ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုတိုက်ခြင်းငှါချီ သွား၍၊ ဒီအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာသူတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ သူတို့ဘုရင်ရှောလုနှင့်သားတော်ယောနသန်သေသည်။ သတင်းသည်မြို့တော်ဂျေရုဆလင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘုရင်ကိုသတ်မယ်ဆိုရင်သူ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအုံကြွမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာသေချာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းတွင်းထဲမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုနဲ့ပရမ်းပတာဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အထွေထွေပရမ်းပတာဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ငါးနှစ်အရွယ် Mefi-Boscheth ၏သူနာပြုသည်သူမနှင့်အတူသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးနန်းတော်မှထွက်ပြေးခဲ့သည်။ အရပျ၌အနိုင်ရသောပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လေပြင်းတိုက်ခြင်း၌, သူမသူ့ကိုလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလေဖြတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့သည်။
“ရှောလု၏သားယောနသန်၌ ခြေနှစ်ဘက်ခြေဆွံ့သောသားတယောက်ရှိ၍၊ အကြောင်းမူကား၊ ရှောလုနှင့် ယောနသန်သည် ယေဇရေလမြို့မှ ရှောလုနှင့် ယောနသန်တို့၏ သတင်းကို ငါးနှစ်ရှိသောအခါ၊ သူ၏ သူနာပြုသည် ပြေးသွားသဖြင့်၊ သူသည် လျင်မြန်စွာ ပြေးစဉ်တွင် လဲကျသွားပြီး ယခုမှပင် ခြေဆွံ့နေလေသည်။ သူ့နာမည်က Mefi-Boscheth »(2. ဆမ် 4,4).
သူသည်တော်ဝင်မင်းကြီးဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ၊ တစ်နေ့မတိုင်မီငါးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ် ဦး ကဲ့သို့သူသည်နန်းတော်ပတ်လည်တွင်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲလမ်းလျှောက်နေသည်။ သို့သော်ဤနေ့၌သူ၏ကံကြမ္မာတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူ၏ဖခင်နှင့်အဖိုးအသတ်ခံရသည်။ သူကိုယ်တိုင်လဲကျသွားပြီးကျန်သူ၏ကျန်ရှိနေသေးသောသူများအတွက်အခြားသူများ၏အကူအညီအပေါ် မူတည်၍ မသန်မစွမ်းဖြစ်နေသည်။ သူ၏နာကျင်မှုကြောင့်သူသည်နောက်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အထိအထီးကျန်ဆန်။ အထီးကျန်နေရာ၌နေလိမ့်မည်။ ဒါက Mefi-Boscheth ပြဇာတ်ပါ။
Mefi Boscheth ဇာတ်လမ်းက မင်းနဲ့ငါနဲ့ ဘယ်လိုဆိုင်လဲ။ သူ့လိုပဲ ငါတို့ထင်ထားတာထက် ပိုမသန်မစွမ်းဖြစ်နေကြတယ်။ သင့်ခြေထောက်များ တုန်ယင်နေမည်မဟုတ်သော်လည်း သင့်စိတ်က တုန်ယင်နေပေမည်။ သင့်ခြေထောက်များ ကျိုးသွားမည်မဟုတ်သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြသည့်အတိုင်း သင်၏ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပျက်ဖွယ်အခြေအနေအကြောင်း ပေါလုပြောသောအခါ သူသည် “သင်တို့သည်လည်း လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်နှင့် သေလွန်ကြပြီ” (ဧဖက်၊ 2,1) ရှင်ပေါလုက ဤအရာကို သင်အတည်ပြုနိုင်သည်၊ ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကူအညီမဲ့ဖြစ်နေကြောင်း ပေါလုပြောပါသည်။ သင်သည် ယေရှုခရစ်နှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးမရှိပါက၊ သင်၏အခြေအနေသည် ဝိညာဉ်ရေးအရသေဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာကဆိုသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အားနည်းသောအချိန်၌ပင် ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင်၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူကြောင်းကို ပြတော်မူ၏။» (ရောမ၊ 5,6 နှင့် ၁၄)။
ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်ဘာမျှမတတ်နိုင်ပါ။ ပိုကြိုးစားရန်မလွယ်ကူပါ။ ကျနော်တို့လုံးဝမသန်စွမ်းဖြစ်ကြသည်, ငါတို့ထင်ထက်ပို။ သိုးများကိုထိန်းကျောင်းသောသိုးထိန်းကောင်လေးဘုရင်ဒါဝိဒ်၏အကြံအစည်သည်ယခုယေရုရှလင်မြို့၌ofသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်နန်းထိုင်နေသည်။ သူသည် Jonatan ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၊ Mefi-Boscheth ၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်သည်တော်ဝင်ရာဇပလ္လင်ကိုလက်ခံရုံသာမကလူတို့၏နှလုံးသားကိုပါရရှိခဲ့သည်။ သူသည်နိုင်ငံကို ၁၅၅၅ ကီလိုမီတာမှ ၁၅၅၀၀၀ ကီလိုမီတာသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အစ္စရေးလူတွေငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့တယ်၊ စီးပွားရေးကကောင်းတယ်၊ အခွန်ဘဏ္revenuesာငွေလည်းမြင့်မားခဲ့တယ်။ ဘဝဟာပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါဝိဒ်သည် နန်းတော်ရှိ အခြားသူများထက် ထိုမနက်စောစောထသည်ကို မြင်ယောင်မိသည်။ သူသည် ခြံဝင်းထဲသို့ အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်ထွက်ကာ အေးချမ်းသော နံနက်ခင်း လေထုထဲတွင် အတွေးများ ပျံ့လွင့်နေစေကာ နေ့၏ ဖိအားများကို သူ့စိတ်မစွဲမီ။ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့အတွက် မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့သစ္စာရှိသူငယ်ချင်း ဂျိုနသန်နဲ့ နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် သူ့အတွေးတွေကို ပြန်ပြောင်းသွားတယ်။ ထိုအခါ ဒါဝိဒ်သည် အပြာရောင်ကောင်းကင်မှ သူနှင့် စကားပြောဆိုမှုကို သတိရလိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ ဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် လွှမ်းခြုံသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယောနသန်မပါဘဲ မည်သည့်အရာမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရသွားသည့် စကားဝိုင်းတစ်ခုကို သတိရမိသည်။ အဲဒီထဲမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို ဘယ်ကိုသွားနေပါစေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိသားစုကို စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် ဒါဝိဒ်သည် လှည့်၍ နန်းတော်သို့ပြန်သွားကာ “ယောနသန်ကိုထောက်၍ ငါသနားခြင်းငှာ ရှောလု၏အိမ်၌ ကျန်ကြွင်းသောသူရှိသလော။ (2. ဆမ် 9,1) ဇိဘအမည်ရှိသော ရှောလု၏အိမ်မှ ကျွန်ဖြစ်သဖြင့် ဒါဝိဒ်ထံသို့ ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ ဇိဘကလည်း၊ ယောနသန်၏ခြေဖဝါး၌ ခြေဆွံ့သောသားတယောက် ရှိပါသေးသည်” ဟု လျှောက်၏။2. ဆမ် 9,3).
ဒါဝိဒ်မမေး၊ ထိုက်တန်တဲ့သူရှိသလား။ ဒါဝိဒ်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမေးတယ်– တစ်ယောက်ယောက်ရှိလား။ ဤမေးခွန်းသည် ကြင်နာမှုပြခြင်း ဖြစ်သည်။ Ziba ရဲ့အဖြေကနေ မင်းပြောနိုင်တယ်- သူ့မှာ တော်ဝင်အရည်အသွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာ ငါသေချာမသိဘူး။ “ရှင်ဘုရင်က၊ သူဘယ်မှာလဲ။ ဇိဘကလည်း၊ သူသည် အမ္မေလ၏သား မာခိရအိမ်၌ လောဒဗာမြို့၌ ရှိ၏။2. ဆမ် 9,4) အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျက်စားရာမြေဟူ၍ မရှိပေ။
စုံလင်သော၊ သန့်ရှင်းတော်မူသော၊ ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ အတိုင်းအဆမဲ့ပညာရှိဘုရားသခင်၊ စကြဝuniverseာတစ်ခွင်လုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သည်ငါ့နောက်သို့ လိုက်၍ သင့်နောက်သို့လိုက်သွားတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လူတို့ကိုရှာဖွေခြင်း၊ စင်စစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ရှာဖွေသူဖြစ်သည်။ ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာအစတွင်အာဒံနှင့် Eve ၀ တို့၏ဇာတ်လမ်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးသူတို့သည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှပုန်းကွယ်ခဲ့သည်။ ညချမ်းအေးသောအချိန်တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဒံနှင့်Eveဝကိုရှာဖွေပြီးသင်အဘယ်မှာနည်း။ မောရှေသည်အီဂျစ်လူသတ်မှုကိုကျူးလွန်မိသည့်ဝမ်းနည်းဖွယ်အမှားကျူးလွန်ပြီးနောက်သူ၏အသက်တာကိုနှစ် ၄၀ ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရပြီးတောသို့ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ အဲဒီမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမီးလောင်ရာချုံပုတ်နဲ့လည်ပတ်ပြီးသူနဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ပေးတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌သခင်ယေရှုသည်လူ ၁၂ ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးသူပခုံးပေါ်ထိုးနှက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် ရှေ့တော်၌ သန့်ရှင်း၍ အပြစ်ကင်းစင်စေခြင်းငှါ၊ ချစ်သောသူ၌ ငါတို့ကို ပေးတော်မူသော ဘုန်းကြီးသော ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို သူ၏သားတော်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ 1,4-6)
ကယ်တင်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ၎င်းကိုဘုရားသခင်ကထိန်းချုပ်ပြီးဘုရားသခင်ကအစပြုထားသည်။ ၎င်းကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်။ ဒါဝိဒ်သည်လူတစ်စုအား Mefi-Boscheth ကိုရှာဖွေရန်ဂိလဒ်ပြည်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ရှိ Lo-Dabar သို့လူတစ်စုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူသည်အထီးကျန်ခြင်းနှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းတို့ဖြင့်နေထိုင်ပြီးမတွေ့ရှိလိုပါ။ ဒါပေမယ့်သူကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့က Mefi-Boscheth ကိုကားထဲထည့်ပြီးသူ့ကိုမြို့တော်၊ နန်းတော်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ဒီရထားစီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာကဘာမှမပြောထားပါဘူး။ ကားရဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ရတာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးစိတ်ကူးကြည့်နိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ နန်းတော်ရှေ့တွင်ကားမောင်းသည်။ စစ်သားများကသူ့ကိုသယ်ဆောင်ကာအခန်းအလယ်တွင်ထားလိုက်ကြသည်။ သူဟာခြေထောက်တွေနဲ့ရုန်းကန်နေရပြီးဒေးဗစ်လည်းဝင်လာတယ်။
“ရှောလု၏သား ယောနသန်၏သား မေဖိဗောရှက်သည် ဒါဝိဒ်ထံသို့ ရောက်သောအခါ ပြပ်ဝပ်၍ ရှိခိုးလေ၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ မေဖိဗောရှက်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၊ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ မစိုးရိမ်နှင့်။ သင်၏အဘယောနသန်ကိုထောက်၍ ကရုဏာကိုပြ၍၊ သင်၏အဘရှောလု၏ဥစ္စာရှိသမျှကို ပြန်ပေးမည်။ ငါ့စားပွဲ၌ နေ့တိုင်းစားရမည်။ ဒါ​ပေမဲ့ သူ​က လဲ​ကျ​ပြီး “မင်း​က ငါ့​လို ခွေး​သေ​ကောင်​ဆီ ပြန်​လာ​ဖို့ မင်း​ရဲ့​ကျွန်၊ ငါ​က ဘယ်သူ​လဲ။” (2. ရှမွေလသည် 9,6-8) ။
သူကသူကမသန်မစွမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနားလည်တယ်။ သူ၌ဒါဝိဒ်ကိုပူဇော်စရာအကြောင်းမရှိ။ သို့သော်၎င်းသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်သဘောသဘာ ၀ သည်မထိုက်တန်သောလူတို့အားကြင်နာ။ ကောင်းသောအရာများပေးလိုသောစိတ်ဆန္ဒဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ရိုးသားကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုနေထိုင်သောကမ္ဘာမဟုတ်ပါ။ ငါပြောတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာငါနေတယ်၊ ​​ငါကငါ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုပြီးလူတွေကိုသူတို့ထိုက်တာကိုပေးတယ်။ ဘုရင်အများစုသည်ပလ္လင်တော်၏အမွေဆက်ခံသူဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒါဝိဒ်သည်မိမိအသက်ကိုမနှမြောဘဲကရုဏာပြခဲ့သည်။ ကရုဏာတော်ရှိသည်အတိုင်း၊
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍ ဘုရားသခင်လက်ခံလာသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ငြိမ်သက်နေပါသည်။ ငါတို့သည် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ အကြွေးတင်ကြပြီ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်ကိုးစားရန် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ခိုင်မာသောခြေရာကို ရရှိစေသည့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်စေခဲ့သည် (ရောမ၊ 5,1-2) ။
Mefi-Boscheth ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရုံမှတပါး အခြားအရာများကို ဆက်ကပ်ရန် မရှိပါ။ “ချစ်ရာသခင်၌ ငါတို့ကို ပေးတော်မူသော ဘုန်းကြီးသော ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းငှါ၊ ကျေးဇူးတော် ကြွယ်ဝသည်နှင့်အညီ၊ အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းတည်းဟူသော၊1,6-7) ။
အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးခွင့်လွှတ်ခံရတယ်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်အလွန်ကြီးစွတကား။ သငျသညျတစ်ခုခုကိုသေးစကားလုံးမကြားရကြသို့မဟုတ်သင်ကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ဖို့ငြင်းဆန်။ သင်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရပြီးဘုရားသခင်သည်သင်နောက်သို့လိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေးဇူးတော်နှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ကြရသည်။ သခင်ယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ငါတို့မထိုက်တန်ဘူး ငါတို့မထိုက်တန်ဘူး။ သို့သော်ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤအံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံးအသက်ဆုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သည်ယခုတွင်ကွဲပြားနေသည်။ Mefi-Boscheth ရဲ့ဇာတ်လမ်းကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုကောင်လေးသည် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ရသည်။ သူ၏ ကံကြမ္မာသည် ပြင်းထန်သော အပြောင်းအလဲကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဒါဝိဒ်​က မေ​ဖီ​ဗော​ရှက်​ကို “ဘု​ရင်​သား​တစ်​ယောက်​လို ငါ့​စားပွဲ​မှာ စား​ပါ”2. ရှမွေလသည် 9,11).
Mefi-Boscheth သည်ယခုအခါမိသားစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ငါဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ပုံကိုကြိုက်တယ်၊ အကြောင်းကတော့စာရေးသူဟာဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးမှာစာမူအနည်းငယ်ရေးထားတာနဲ့တူတယ်။ Mefi-Boscheth သည်ဤကျေးဇူးတော်ကိုမည်ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုသူသည်ဘုရင်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်နှင့်သူစားပွဲတွင်စားရန်ခွင့်ပြုခြင်းခံရပြီဖြစ်သည်။
နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်အောက်ပါမြင်ကွင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဘုရင့်နန်းတော်မှခေါင်းလောင်းသံများမြည်။ ဒါဝိဒ်သည်အဓိကစားပွဲပေါ်မှာလာပြီးထိုင်သည်။ များမကြာမီတွင်သူသည်လိမ္မာပါးနပ်သောအာမနုန်သည်ဒါဝိဒ်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ထိုင်လေသည်။ ထိုနောက်မှအဆင်းလှ။ အဆင်းလည်းလှ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူရှောလမုန်သည်သူ၏လေ့လာမှုမှတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာသည်ဟူသောအတွေးတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဗရှလုံသည်စီးမျောနေသောပခုံးအရှည်ဖြင့်ထိုင်သည်။ ထိုညနေ၌ရဲရင့်သောတပ်မှူးနှင့်ယွာဘကိုညစာစားရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုင်ခုံတစ်နေရာမှာလစ်လပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကစောင့်နေကြသည်။ ရှုပ်ထွေးနေသောခြေလက်များနှင့်ချိုင်းထောက်များ၏စည်းချက်သံကိုသင်ကြားသည်။ Mefi-Boscheth သည်စားပွဲပေါ်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်နေသည်။ သူထိုင်ခုံပေါ်သို့ချလိုက်သည်။ Mefi-Boscheth ကကျေးဇူးတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်သလား။
ဘုရားသခင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးသည်ပွဲစားစားပွဲတစ်ခုတွင်ကောင်းကင်၌စုဝေးကြမည့်အနာဂတ်မြင်ကွင်းကိုသင်သိသည်။ ဒီနေ့မှာဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်စားပွဲပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ခင်ဗျားတို့တွေ့မြင်၊ ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲ ၀ င်ပုံကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ နေ့ရက်တိုင်းသည်သူ၏ကျေးဇူးတော်လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
“သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယခုသင်လက်ခံသည်နှင့်အမျှ၊ သခင်၌ အမြစ်စွဲ၍ တည်ကြည်၍ ယုံကြည်ခြင်း၌ ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာ ခံယူ၍ ကျေးဇူးတရားနှင့် ပြည့်ဝသည်” (ကောလောသဲ၊ 2,6စာ-၇)။ သူတို့သည် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ယေရှုကို လက်ခံခဲ့သည်။ ယခုသင်သည် မိသားစု၌ရှိ၍ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ခရစ်ယာန်များဖြစ်လာသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆက်လက်၍ ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပိုကြိုးစားရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အချို့က ယူဆကြသည်။ ဟုတ်တယ်၊ အမှန်တရားနဲ့ ဘာမှမကွာနိုင်ဘူး။
ဘုရားသခင်သည် သင့်အား သခင်ယေရှုအား သင့်မိသားစုထဲသို့ ရောက်ရှိလာစေရန်အတွက်သာမက၊ သင်သည် မိသားစုတွင်ရှိသောအခါတွင် ကျေးဇူးတော်နှင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ယခု သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးကို ပေးတော်မူ၏။ “ဒီကိစ္စကို အခု ဘာပြောချင်လဲ။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အတွက်ဖြစ်လျှင် အဘယ်သူသည် ငါတို့ကိုဆန့်ကျင်နိုင်မည်နည်း။ အဘယ်သူသည် မိမိသားကို မနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအတွက် စွန့်တော်မူသည်-၊ သူသည် ငါတို့ရှိသမျှကို အဘယ်သို့ မပေးသင့်သနည်း။” (ရောမ 8,31-32) ။
ဒီအချက်ကို သိတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အပေါ် သင့်တုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။ သင်ဘာကူညီနိုင်မလဲ။ တမန်တော်ပေါလုက သူ၏အတွေ့အကြုံကို ဤသို့ဆိုသည်– “ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ငါသည် ငါဖြစ်၏ ။ ငါ့၌ ကျေးဇူးတော်သည် အချည်းနှီးမဖြစ်ဘဲ၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်” (1. ကောရိန္သု ၁5,10).
သခင်ယေရှုကို သိသောကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သော အသက်တာတွင် အသက်ရှင်နေသလော။ ကျွန်ုပ်၏ ကျေးဇူးတရား၏ အသက်တာကို ညွှန်ပြသော လက္ခဏာအချို့ကား အဘယ်နည်း။ ဤမေးခွန်းအတွက် ရှင်ပေါလုက “ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် ဧဝံဂေလိတရားကို သက်သေခံရန် သခင်ယေရှုထံမှရရှိသော ရာထူးကို ထမ်းဆောင်ရုံမျှဖြင့် ကျွန်ုပ်၏အသက်တာကို ဖော်ပြထိုက်သည်ဟု မထင်ပါနှင့်” (တမန်တော်၊ တမန်တော် ၂၀း၂၄)။ အဲဒါက ဘဝတာဝန်ပဲ။
Mefi Boscheth လိုပဲမင်းနဲ့ငါဟာဝိညာဉ်ရေးအရပျက်စီးသွားပြီးဝိညာဉ်ရေးမှာသေသွားပြီ သို့သော်သူကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့စကြ ၀ ofာဘုရင်ကကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်၍ သူ၏မိသားစုတွင်ပါ ၀ င်စေလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအားဖြင့်သူ၏ကျေးဇူးတော်သတင်းကိုမျှဝေရန်ကိုယ်တော်အလိုရှိသည်။
လန်း Witt ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်